Hotarihan’i Beijing ny ankizy mpianatra ao Hong Kong hahay ny fiarovam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Manomboka amin'ny fahaenintaona ny lesona fitiavan-tanindrazana
Voadika ny 19 Febroary 2021 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Esperanto , English
Pika avy amin'ny horonantsarin'ny Biraon'ny Fanabeazana ao Hong Kong.
Manomboka amin'ny fahaenintaonany ny ankizy dia efa handray fanabeazana momba ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong, araka ny torolalana naelin'ny Biraon'ny Fanabeazan'ny tanàna ao amin'ireo sekoly an-toerana tamin'ny 5 Febroary.
Takian'ny torolalana, izay mitarika ny mpitantana sy ny mpampianatra ambony amin'ny fametrahana ny fanabeazana ny fiarovam-pirenena, ny mpampianatra amin'ny ambaratonga rehetra hampianatra ireo fandikan-dalàna mivoitra amin'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ao Hong Kong — ary tononona amin'izany ny fisintahana, ny fanohintohinana, asa fampihorohoroana, ary ny fifandraisan-tendro amin'ny hery vahiny.
Ny Andininy faha-10 amin'ny fiarovam-pirenena, nolaniana tamin'ny Jolay 2020 ho setrin'ny hetsika fanoherana fandefasana sinambotra ho any Shina naharitra herintaona, no manery ny governemantan'i Hong Kong hampiroborobo ny fanabeazana ara-piarovampirenena any amin'ny sekoly, oniversite, ary amin'ny alalan'ny vondrona sivika (fanabeazana olompirenena) sy ny seha-baovao.
Tanisan'ny torolalana nivezivezy tamin'ny 5 febroary ihany koa ireo fandaharana tsy maintsy ianarana any an-tsekoly. Ohatra, ny hampianarana ny tsipika sivy [sisintany ifandirana amin'ny firenenkafa] any amin'ny Jeografia, ny politikan'i Shina amin'ny fisorohana ireo areti-mifindra any amin'ny biolojia, ary ny fomba fihira mety amin'ny fihirana ny hiram-pirenena shinoa any amin'ny taranja hira. Voararan'ny torolalana ny andraisan'ny mpampianatra fomba fiadian-kevitra [mampisy adihevitra] rehefa mampianatra lalàna mifandraika amin'ny fiarovam-pirenena.
Nomena torolalana ihany koa ny mpitantana handrara boky, vakiteny na afisy politika izay mety hanohintohina ny fiarovam-pirenena tsy hivezivezy amin'ny faritry ny sekoly. Nilazana ihany koa ry zareo hitatitra [hitory] any amin'ny polisy raha miahiahy mpiasa na mpianatra nanitsakitsaka ny lalànan'ny fiarovam-pirenena. Napetraka ho ohatra amin'ny hetsika tsy manara-dalàna notononin'ny torolalana ny “fanaovana tohivakan'olombelona” sy ny “mihiaka teny tigetra” toy ny “Revolisionan'ny androntsika.”
Mihatra amin'ny sekolin'ny tsy miankina sy ny sekoly iraisampirenena ao Hong Kong ihany koa ny fitsipika, na tsy voatery hametraka tatitra isa-potoana any amin'ny Biraon'ny Fanabeazana tahaka ny sekolim-panjakana.
Namoaka horonantsary natao manokana ho an'ny mpianatra ao amin'ny fanabeazana fototra mifanaraka amin'ny toromarika vaovao ny Biraon'ny Fanabeazana :
Ametahan'ny mpiserasera maro anarana ao amin'ny media sosialy ho”fanasana atidoha” ny taranja vaovao:
— Nick 😷 Fight for Freedom (@NickDemocracy) February 5, 2021
Araka ny fanjohin-kevitry ny AKS (CCP) “mampididoza ny fiarovam-pirenena” ny mifampitantana, manao rojo olombelona, mihiaka sora-baventy, mitafy kojakoja fanampiny. Manery hametrahana karazan-drafi-panabeazana “manasa atidoha” eto HK ny AKS ary manesika ny “fitiavan-tanindrazana” ho an'ny mpianatra HK.
Ao amin'ny Facebook, esoesoin'ny mpiserasera ny fandraràna hafatra ara-politika. Misy ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratry ny pejy Facebook The Stand News no miteny:
Ankehitriny azo adika ho fanakorontanana ny fitazonana taratasy tsy misy soratra
Maninona moa ianareo raha mamoaka rakibolan'ny voambolana voasivana?
Rahampitso rahafakampitso, raha mitondra aroorana na elo mavo any an-tsekoly ny mpianatra, mety ho voasazy ve ry zareo? Na ho voaroka any an-tsekoly?
Tamin'ny herintaona, nesorin'ny Biraon'ny Fanabeazana tao amin'ny fanadinana hiditra oniversite ny fianarana malalaka [liberaly] ary nosivaniny ny lohahevitra tahaka ny “fisarahan'ny fahefana” ao amin'ny boky. Mpampianatra maro ny niady hevitra nandresy lahatra tamin'izany fotoana izany fa mandrisika ny mpianatra ny fianarana malalaka hampivelatra ny fisaina mitsikera.
Maneho hevitra amin'ny fironana ny mpisera Twitter Tin Fong Chak:
Vonoin'ny biraon'ny fanabeazana HK ho faty ny Fampianarana Liberaly izay manamafy ny fieritreritra mahay mitsikera saingy soloina amin'ny fanasana atidoha ara-politika momba ny fitiavantanindrazana. Manasongadina kokoa ny fivoarana tsara an'i Shina sy ny fiarovam-pirenena. Fa tsy ny resaka fampanjakana ny lalàna sy ny zon'olombelona.
Ary ny mpisera @dc4_hk matahotra fa hoporetina ny fisainana mahaleotena:
— DC4HK – Washingtonians Supporting Hong Kong 😷 (@dc4_hk) February 6, 2021
Miezaka hanjaka tanteraka amin'ny fitaozana ny ankizy i Shina. Tsy ho afaka mieritreritra amin'ny fomba hafa akory isika.